Madaxweyne ku xigeenka Somaliland ‘Saylici‘ iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo maanta gaaray Berbera | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweyne ku xigeenka Somaliland ‘Saylici‘ iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo maanta gaaray...
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland ‘Saylici‘ iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo maanta gaaray Berbera
Berbera (Halqaran.com) – Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, Mudane, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) iyo Wafti uu hoggaaminayo ayaa Sabtidii maanta gaaray Magaalada Berbera Ee Xarunta Gobolka Saaxil, halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey.
Safarka Mudane Saylici ayaa ujeedadiisu tahay kormeerka Mashruuca JPLG ee Dawladaha Hoose ee Berbera, Burco iyo Oodweyne, mashruucan oo uu Madaxweyne ku xigeenku garwadeen ka yahay ayaa sanadkiiba hal mar uu ku soo kormeeraa Degmooyinka uu mashruucaasi ka socdo.
Ugu Horrayn Madaxweyne ku xigeenka oo halkaasi hadal ka jeediyey ayaa waxa uu yiri, “Waxaa maanta Farxad weyn noo ah inaanu maanta nimaadno Degmadii Berbera kormeerkii sannadlaha ahaa ee mashruuca JPLG-ga, iyadoo aanu sannad walba mar soo marno degmooyinka uu ka socdo mashruucaasi, marwalbana aanu kusoo horayno degmada Berbera”.
Maayirka Degmada Berbera iyo masuuliyiinta Dawladda Hoose ee Berbera oo uu kulan la qaatay Madaxweyne ku xigeenku ayaa waxa ay ka warbixiyeen geedi socodka Mashuurca JPLG, waxa uga qabsoomay muddadii ay joogeen iyagoo si rasmiya u soo bandhigay wax qabad buuxa iyo taabagelinta qorshihii mashruucaasi, waxaana ay sheegeen inay xooga saareeen Caafimaadka iyo Waxbarashada.
Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), madaxweyne ku xigeenka Somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa bogaadin u soo jeediyey Golaha Deegaanka Degmada Berbera oo ay horkacayaan Maayirka iyo Xoghayaha fulinta.
Ugu dambeyn, madaxweyne ku xigeenka Somaliland ayaa ku ammaanay Maayirka iyo Xoghayaha fulinta masuuliyada xilkasnimada leh ay sameeyeen iyo siday uga dhabeeyeen himiladii mashruucaasi dhankooda.